Bug muIOS 11.1.2 inokonzeresa kurovera pa iPhone ne iPad. Kwidziridzwa kune iOS 11.2 | IPhone nhau
Bug muIOS 11.1.2 inokonzeresa kurovera pa iPhone ne iPad. Kwidziridzwa kuIOS 11.2
Si hauna kugadzirisa kuIOS 11.2 parizvino, hazvizotora nguva. Uye zvimwe kana iwe uri mumwe wevaya vanoshandisa manyorerwo nezviziviso zvemuno zviri kuita kuti Apple mobiles uye iPads ipinde loop kiya nguva dzose. Sezvo ivo vanongedzera kubva Macrumors, Apple Stores muAustralia vaigamuchira kuwanda kwekukumbira rutsigiro kubva kune vashandisi vaive nedambudziko
Dambudziko rinoratidzwa kuti rinokanganisa vashandisi vanga vaisa iOS vhezheni 11.1.2 pane zvishandiso zvako. Uye zvakare, pane imwe nguva chaiyo kana zvese zvatanga: 12.15:2 AM musi waZvita XNUMX. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, vese vashandisi vakagashira zviziviso zvemuno vakagovana matambudziko padandemutande: kunyanya kukuvara kwekupedzisira uye kukundikana kunogara kuripo.
Vashandisi veforamu dzeReddit vaive vawana mhinduro nekuremadza aya maziviso kwenguva pfupi mhinduro padzakasvika. Vamwe vakasarudza kugadzirisa zuva uye nguva yemakomputa avo. Ndokunge, 'kubiridzira' iyo iPhone inoratidza kutanga kwaDecember 2 na12.15: XNUMX AM. Iyi mhinduro yekupedzisira yakapihwa nevashandi veApple vanotsigira. Uye zvakare, zvinofanirwa kutaurwa kuti kuburitsa uye kudzoreredza maapplication kwanga kusingabatsire.
Zvisinei, nguva pfupi mushure mekuvandudzwa kwepamutemo kubva kuApple, iOS 11.2 inogadzirisa zvese, sekutaura kwavo. Naizvozvo, pamusoro pekuwana kuvandudzwa kweshanduro nyowani (Apple Bhadhara Cash kuti ugamuchire, tumira uye ubvunze mari kuburikidza neApple Pay nevako vaunofambidzana navo - parizvino inongowanikwa muUnited States -; kuvandudzwa kwekuchaja zvisina waya uye mazhinji kuwedzera), gadzirisa izvi tsikidzi kubva ku-iOS 11.1.2.
Naizvozvo, kana usati wagadzirisa kuIOS 11.2 uye uri kusangana nekumwe kwekukundikana uku (runyorwa rwakakwana rwemaapps akanganiswa nezviziviso zvemuno haana kupihwa), iwe unoziva kuti iyo nyowani vhezheni inozvigadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Bug muIOS 11.1.2 inokonzeresa kurovera pa iPhone ne iPad. Kwidziridzwa kuIOS 11.2
Ini ndine yangu iPhone 6 Plus pane iOS 11.0 (15A372) pasina dambudziko.
Kugadziridza chete uye kana zvanyatso simbiswa. Nenzira iyi tichadzivirira matambudziko, senge ari kuitika.
Rubén, tiri muna Zvita. Dambudziko rakatanga musi waZvita 2. Kwete munaNovember 2 ...
Ruben gallardo akadaro
Chaizvoizvo, David. Katsvedza. Kutenda chiziviso uye nekuverenga isu!
Pindura Ruben Gallardo
Ana Mari kuChacaltana akadaro
Mhoro! Ini ndatova neshanduro 11.2 yakaiswa uye matambudziko akatanga kubva nhasi na6 am. Iko Kuenderera Kuvharidzira. Mhinduro?
Pindura Ana Mari kuna Chacaltana
Ini ndakagadzirisa uye voila, chete kuti dambudziko rangu rakatanga nezuro wa3 na12: 15.
Pindura kuna benja
mahotera mu cali akadaro
varombo IT vakomana vane basa rekugadzirisa iyo bug
Pindura kumahotera mu cali
Marcela gonzalez akadaro
Dambudziko rangu ndeimwe nzira yakatenderedza, ndine iPhone SE uye iOS11.2 uye kubvira Svondo 3/12 inondisungirira uye inobvunza password nguva dzese !! Zvandinogona kuita?
Pindura Marcela Gonzalez
JESUS ​​ARROYO DIARTE akadaro
Ini ndichine matambudziko kusvika nhasi, ini ndakagadzirisa kune izvo zvitsva zvinyorwa zvine matambudziko mazhinji nekuda kwekugara uchitangazve, uye sekunge izvo zvaive zvisina kukwana ndine matambudziko akasiyana siyana andisina kana zuva iro risati rasvika, mamwe matambudziko nemidziyo yangu yebluetooth , yekuisa uye inobuda mafoni, kunonoka parunhare uye kutya kwakawanda kudzima foni nekuti iyo reboots inotangazve. Ini handisati ndabata Apple apple technical tsigiro nekuti kwese kwandinotsvaga mhinduro vanogara vachiratidza kumirira kugadziridzwa nyowani uye hapana .. iyo iphone 7 uye yakagadziridzwa kune vhezheni 11.2.1. Hazvinyanyo kutsamwisa, ini handizvide kune chero munhu uye ini ndingafarire zvikuru chero mhando yerubatsiro. Ini ndakanyora komendi iyi ndine zvakawanda zvekusvotesa uye nekushushikana saka ndinovimba unoregerera chiperengo changu. Ndatenda.
Pindura kuna JESUS ​​ARROYO DIARTE
Buenas tardes. Dambudziko rangu nderekuti mimhanzi haina kurira mushe, sekukanganisa kudiki
HEX inotangisa yayo nyowani Star Wars iPhone makesi
iOS 11.2 yekupedzisira vhezheni yave kuwanikwa kune wese munhu